Sidee inuu ka soo kabsado Xogta laga HP Flash Drive
> Resource > Flash Drive > Sidee inuu ka soo kabsado Xogta laga HP Flash eryi
Waxaan ka My HP Flash Drive soo kaban karto, Data?
Hi, waxaan doonayay inaan ka soo kabashada flash disk waayo, mini hp 110-1131DX Tord. Nidaamka qalliinka waa daaqadaha 7. xal waxaa looga mahadinayaa. Thanks.
Si aad u soo ceshano xogta lumay ka HP flash drive, waxa aad u baahan doontaa in aad joojiso isticmaalka flash si degdeg ah ka dib markii xogta ka lumay ee. Haddii kale xogta lumay loogu overwritten karaan macluumaadka cusub. Markaas waxaad u iman kartaa inaad Internet in ay doortaan barnaamijka soo kabashada ugu fiican.
Halkan waa talo: Wondershare Data Recovery , ama Wondershare Data Recovery for Mac . Tani aalad awood leh soo kabashada awood u in aad ka bogsato files lumay ka HP flash drive fudayd, iyadoo aan loo eegayn files yihiin sababta loo waayey tirtirka shil ah, MIS-maaraysay, nidaamka sababo kale oo qalad iyo xumaan toona. Sidaa daraadeed, oo dhan waxaad u baahan tahay inaad samayso waa in baarista HP flash drive dooro files inuu ka soo kabsado.
Waxaad hadda karaa download version tijaabo ah Wondershare Data Recovery ah. By isticmaalaya version maxkamadda, iskaan kartaa flash drive ka hor wax iibsiga ee dib u soo kabashada. Habkaani waa run ahaantii weyn!
3 Talaabada inay Qabtaan HP Flash Drive Data Recovery
Haddaba ee loo farsameeyo soo kabashada la Windows version of Wondershare Data Recovery. Dadka isticmaala Mac, waxa kale oo aad kala socon kartaa tallaabooyinka la mid ah la version Mac.
Tallaabada 1 Select Ladnaansho Mode
Door Ladnaansho Mode Kadib markii ay Wondershare Data Recovery, aad arki doonaa daaqad oo bixiya 3 hababka soo kabashada. Halkan waxaan ku dooran kartaa "File lumay Recovery" in ay sii wadaan.
Tallaabada 2 Dooro HP Flash Drive in Sawirka u Khasaaray Data
Halkan waxa aad u baahan tahay si aad u hubiso in aad HP flash drive in si wanaagsan loo xiran karo your computer. Barnaamijka waxaa si toos ah u tusi doono oo dhan drives on your computer adag, oo ay ku jiraan qalab lagu kaydiyo dibadda.
Waxaad u baahan tahay oo kaliya in ay doortaan mid ka mid ah si aad u HP flash drive oo guji "bilow" in iskaan.
Fiiro Gaar ah: "Enable Deep Scan" waa awood badan, laakiin waxa ay qaadataa waqti dheer oo aan lahayn magac file asalka la tusay doonaa natiijada iskaanka.
Tallaabada 3 Ladnaansho Files fromYour HP Flash Drive Xulo
Marka gool scan ah, dhammaan faylasha helo waa la soo bandhigi doonaa bidixda daaqadaha barnaamijka. Waxaad ka eegi kartaa haddii ay yihiin waxa aad rabto inuu ka soo kabsado magac file ama jidka file. Sidoo kale, waxaad awoodi doontaa in ay ku eegaan noocyada file qaar ka mid ah sida sawiro.
Markaas kaliya aad u baahan tahay in ay doortaan faylasha aad rabto in la soo celiyo oo guji "Ladnaansho" in ay iyaga ku soo celi si aad u computer badbaadiyo.
Fiiro gaar ah: Ammaanka soo kabashada, fadlan ha ka badbaadin dib si aad u HP flash drive ee files soo kabsaday. Just dooro qalab cusub ama meel on your computer si ay u sii.